Miray hevitra ny Jordaniana amin’ny fanoherana ny politika ara-toekarenan’ny governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jona 2018 4:34 GMT
Tanora jordaniana iray mitazona ny sainam-pirenen'i Jordania eo afovoan'ny fihetsiketsehana. Sary Raad Adayleh. Fampiasana nahazoan-dalana.
Miray hina ny Jordaniana na dia eo aza ny fizarazarana ara-politika, ara-toekarena ary ny lahy/vavy ho fanoherana ny lalànan'ny hetra vaovao sy ny fiakaran'ny vidin'ny herinaratra sy ny akoranafo, ary efa hita fa nisy fiantraikany ny hetsik'izy ireo tamin'ny fametraham-pialan'ny praiminisitra.
Nivory taorian'ny Iftar (fampitsaharana ny fifadian-kanina nandritra ny volan'ny Ramadan) tao amin'ny Fourth Circle (Faribolana Fahaefatra), izay misy ny biraon'ny Praiminisitra ao Amman, renivohitra jordaniana, ireo mpanao hetsi-panoherana ary nijanona tany izy ireo mandra-pahatongan'ny souhour (fotoana hanombohana indray ny fifadian-kanina), izay eo ho eo amin'ny enina ora tsy tapaka. Ahafahan'ny firenena miasa amin'ny ankapobeny mandritra ny andro ity fandaharam-potoana ity, tsy manimba ny toe-karena izay efa mahantra, ary manohy mandefa hafatra mahomby sy tsy mampiroaroa saina.
“Tsy nanam-potoana natoriana izahay iny alina iny, afa-tsy adiny roa na telo isan'andro, saingy io ny fomba tokana ahafahanay tsy manimba ny firenena nefa mampiasa ny zonay izahay” hoy i Ahmad Jalal , mpanao fihetsiketsehana iray tamin'ny Global voices.
Nijoro nanoloana ny minisitera ireo mpanao fihetsiketsehana, mihiaka ny teny filamatra manohitra ny governemanta, mihira hira nasionalista, ary mitazona takelaka misy teny manan-danja “#Maanash” izay midika hoe “Tsy manana izahay”
Feno filaminana ny famoriam-bahoaka, ary tsikaritra tokoa ny halemem-panahy eo amin'ny polisy sy ny mpanao fihetsiketsehana, mifanolotra rano sy daty mandritra ny ora maro amin'ny alina. Horonantsary iray nalaza mampiseho ireo mpanao fihetsiketsehana mamihina ny polisy alohan'ny hody any antranony amin'ny andro faharoa amin'ny hetsika:
Avo dia avo tokoa ny fandraisana anjaran'ny vehivavy, voalohany tany amin'ny firenena mpandala ny nentin-drazana toa an'i Jordania.
Miakatra ny hetra sy ny vidin-javatra ho an'ny mponina efa sahirana
Ny lalàna izay niteraka ny hetsika dia natao hampitomboana ny fidiram-bolan'ny fanjakana amin'ny alàlan'ny fanitarana ny lasitry ny hetra sy amin'ny fanenjehana ireo fandosirana fandoavan-ketra ataon'ny orinasa sy ataon'olon-tsotra, ary ao anatin'ireo fepetra noraisina hatramin'ny nahazoan'i Amman fampindramam-bola notsinjaraina mandritra ny telo taona mitentina 723 tapitrisa dolara amerikana avy amin'ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena tamin'ny taona 2016. Io trosa io, izay tsy maintsy manohana ny fanavaozana ara-toekarena sy ara-bola, ary manana tanjona lavitr'ezaka ho fampihenana ny trosam-panjakana Jordaniana avy amin'ny 94 isanjato ka mankany amin'ny 77 isanjato amin'ny harin-karena anatiny amin'ny taona 2021.
Hampidinin'ny lalàna ho 8000 dinars sy mihoatra ny karama manomboka mandoa hetra (eo ho eo amin'ny 9600 euros) ary ny an'ny fianakaviana dia nampidinina ho 16000 dinars (eo ho eo amin'ny 19000 euros) sy mihoatra, ka ny tahan'ny hetra dia manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 25%. Ankoatra izany, ny olom-pirenena manomboka 18 taona dia mandoa hetra 100 dinars isan-taona (120 euros eo ho eo), ary avo roa heny ny taona manaraka raha tsy voaloa. Tsy maintsy aloa ny hetra na inona na inona fidiram-bolan'izy ireo.
Raha ny an'ny orinasa indray (indrindra fa ny banky, ny orinasa mpamokatra herinaratra, ny mpamatsy herinaratra sy rano), 20 hatramin'ny 40 isanjato ny hetra
Herinandro taorian'ny namoahana ny lalànan'ny hetra dia nanambara ny governemanta fa hiakatra 23,5 isanjato ny vidin'ny herinaratra ary 4,5 hatramin'ny 5,5 isanjtao kosa ny solitany.
Izany rehetra izany amin'ny fotoana izay iainan'ny Jordaniana ny taha ambony amin'ny tsy fananan'asa sy ny vidim-piainana, ary ny fahambanian'ny karama.
Fotoana fohy talohan'ny niandohan'ny fihetsiketsehana, voasokajy ho tanàna arabo faran'ny lafo fiainana indrindra i Amman ary faha 28 lafo fiainana indrindra maneran-tany, tarehimarika tsy misy ifandraisany amin'ny fidiram-bolan'ny tsirairay sy ny tolotra ho an'ny daholobe.
Ambonin'izany rehetra izany, nanana fiantraikany goavana teo amin'ny fidiram-bola sy ny politikan'ny governemanta Jordaniana ny toe-draharaha ara-jeopolitika any Afovoany Atsinanana, satria manana mpitsoa-ponenana mihoatra ny iray tapitrisa ao amin'ny taniny ny firenena.
Na dia heverina ho ny sarangan'ny manana sy ny orinasa aza no kinendrin'ny lalànan'ny hetra– 541 euros isam-bolana ny fidiram-bolan'ny isan'olona ankapobeny ao Jordania, mbola ambanin'ny kely indrindra hangalàna hetra — be ny ahiahy fa ny mpanjifa no hitelina ny fiakaran'ny vidin-javatra raha mamaly amin'ny fampiakarana ny vidin-javatra ny orinasa, toy ny tranga tany aloha tamin'ireo orinasan'ny fifandraisandavitra.
“Hita tao amin'ny fitondran-tenan'ny governemanta ny tsy fahamalinana sy ny tsy fanajàna olona, izay nandàny lalàna roa tsy nisainana tanatin'ny herinandro latsaka,tsy nihevitra akory izay ho valiny avy amin'ny hafa”, hoy i Mohsen, mpikambana iray ao amin'ny sendikan'ny mpisolovava, izay nisafidy ny tsy hotononina afatsy amin ny fanampin'anarany, tamin'ny Global Voices.
“Mila fanovana politika izahay fa tsy fanovana anarana”
Ny dingana voalohany nanoherana ny lalànan'ny hetra dia ny fitokonana notontosain'ny sendika tamin'ny Alarobia 30 Mey. Nihahenjana kokoa ny fihetsiketsehana taorian'ny fanambaràna ny fiakaran'ny vidin-javatra,fanapahan-kevitry ny governemanta.
Raha nampiato avy hatrany ny fiakaran'ny vidin-javatra ny Mpanjaka Abdallah faharoa nandritra ny volan'ny Ramadan dia tsy nisy antoka fa tsy ho tanterahana izany, noho izany nitohy ny fihetsifetsehana?
Nanararaotra nanohitra ny politikan'ny hetra rehetra novolavolaina tato anatin'ny taona vitsivitsy ny sendikan'ny mpiasa sy ny olon-tsotra ary nihevitra azy ireo ho tafahoatra. Nampidirina tamin'ny fanehoan-kevitra ihany koa ireo lohahevitra tsy mifandraika amin'ny governemanta, toy ny kolikoly parlemantera.
Namaly ny fanentanana ny mpanjaka tamin'ny 4 Jona ary nangataka tamin'ny governemanta mba hametra-pialana, ary nanankina ny fananganana iray vaovao tamin'i Omar Al-Razzaz, minisitry ny fampianarana taloha, olona iray hajain'ny jordaniana maro. Manampy an'izany , nanamafy ny manam-pahefana fa hangataka amin'ny FMI i Jordania mba hanome fe-potoana bebe kokoa ahafahana hampihatra ny fanitsiana.
Nampisera-kevitra tamin'ny tao amin'ny tambajotra sosialy anefa ny fametraham-pialana. Afa-po tamin'ity fanapahan-kevitra ity ny sasany ary nanamafy ny fahafahan'ny governemanta vaovao hitady vahaolana amin'ny trosan'ny firenena. Ny hafa dia nahita ilay fepetra ho tsy mahomby, nilaza hoe “te-hanova politika izahay, fa tsy anarana”.
Mpikambana iray avy amin'ny AlHerak AlShaabi (antoko politika iray izay isan'ny mpikarakara ny hetsi-panoherana) no nilaza tamin'ny Global Voices fa ” tsy misy dikany ny fanovana ny governemanta satria miova isaky ny roa taona izany. Mila ny tena fiovana marina izahay. Tsy ilainay ny itantaran'olona samihafa zavatra iray ihany.”
Mbola miantso hanaovana fihetsiketsehana vaovao ny sendika sy ny antoko pôlitika sasany, raha te hiandry kosa ny hafa mba ijereny izay ho vitan'ny governemanta vaovao.